Blackberry tii: ndeyei? Ndezvipi zvakanakira? Kugadzirira sei?
Crepioca: Tsvaga iyi yekusimudza snack sarudzo yaunogadzira kumba
utano	 23 December 2018
Matai ari kutora hupenyu hwevaBrazil vanosarudza kuve nehupenyu hwezuva nezuva, kure nemishonga, chikafu chisina hutano uye hupenyu husingadzoreki. Imwe yadzo yakave chikamu chechiitiko chevane hutano maBrazil ndeye blackberry tii.
Blackberry tii yakanakira hutano, yekudzivirira chirwere, nekuita kuti muviri wako uve noutano. Mune inotevera misoro iwe unodzidza nezve zvakakosha mabhenefiti eiyi tii, pamwe nerumwe ruzivo rwakakodzera nezvayo. Tarira!
Chii chinonzi blackberry tii?
Iyo yeblackberry tii, kutanga kwezvose, inofadza. Izvo zvinoita kuti zvive zvakakosha kuve nekapu kana maviri echinwiwa ichi kamwe kana kaviri pavhiki. Asi mukuwedzera pakuve unonaka, zvakare ine zvakawanda zvakanakira hutano.
Iyo yeblackberry tii yakafuma kwazvo mu calcium, ine zvakapetwa ka22 mari ine mukaka. Izvi zvinoita ichi chikuru kubatsirwa tii. Kune hutano hwemunhukadzi, semuenzaniso, izvi zvinovaka muviri mumashizha eblackberry zvakanaka pakuderedza kurwadza kwekuenda kumwedzi uye kunyevenutsa mhedzisiro yekukakavara kwekutanga kuenda kumwedzi.
Iyo yeblackberry tii iripowo chaizvo muhutano hwevanhu hwepfungwa. Zvakanaka kune avo vane shanduko mu sono, kushushikana, kushushikana uye nevamwe.
Uye, hongu, zvakanakira hutano hwepfupa. Iine huwandu hwese hwecalcium, mapfupa ako anozove akasimba, akagwinya, akagadzirira kutsiga nehusiku uye hwekuneta hupenyu hwezuva nezuva hwevanhu vazhinji.
Miura imhando yeblackberry iyo yave ichishandiswa zvakanyanya muchimiro cheti neavo vanofarira uye vanotsvaga kuve nehutano uye hwakawedzera hupenyu hwepanyama.
Miura akakura munyaya yehutano hwevakadzi, maronda, PMS, libido pachayo uye inoshandawo pazvinhu zvekuguma kuenda kumwedzi: kupisa, kudikitira, kutsamwa, kushushikana, kutemwa nemusoro, nezvimwe.
Uye zvakare, Miura bheribheri tii yakanaka kune BP, kushanda kwakakodzera kweitsvo uye chiropa, uye zvakare inorwisa-kuzvimba.
Cranberry tii inoita kuti uremerwe uremu here?
Imwe yezviito zvechinyakare mabheribheri tii ndeyekuti iwe uchinje zvisina hutano uye macaloriki zvinwiwa zveiyo iyo yakanyanya kushomeka caloric uye yakanyanya hutano. Izvi zvinokuita kuti inase macalorie mashoma, kupedzisa kubvarura kunounzwa nekuwandisa kwesodhidhi yekushandisa, muchidimbu, izvi zviito zvinounza kurasikirwa uremu.
Uye iyo yeblackberry tii yakagadzirirwa izvo chete. Panzvimbo yekumwa soda, chinwiwa chinodhakisa, kana kunyangwe muto unotapira, sarudza blackberry tii, inova kuravira, kutonhora-chando, kunonaka uye zvakanyanya kushomeka macalorie.
Izvi zvinounza iwe hutano hwakawanda uye, panguva imwechete, zvinokubatsira kurasikirwa nemapaundi mashoma. Zvese zvinosanganiswa nekudya zvine hutano, zvine mwero uye tsika yekurovedza muviri, mukuwedzera pakunwa mvura yakawanda zuva rega rega.
Chii ichi chine hibiscus?
Hibiscus ndeimwe tii iyo yakatanga kunwiwa zvakanyanya, kunyanya nekuda kwayo kwekutsvedza, kwekubvisa sodium, inosvibisa munhu ane hupenyu husingadzoreke uye ari kudya zvisirizvo.
Unogona kutora musanganiswa wevaviri, asi hazvina kunaka kuti uwedzere kudarika pahibiscus. Iyo ine mamwe mhedzisiro, kunyanya mumadzimai. Saka, tora hibiscus shoma uye mashoma pavhiki kuti udzivise kuve nezvinetso zvekubereka uye nezvimwe zvinosanganisira hutano hwevakadzi.
Ndezvipi zvakanakira blackberry tii?
Iwo mabhenefiti makuru eblackberry tii ari mukuumbwa kwezvinovaka muviri. Sezvo iine yakawanda calcium, izvi zvakanaka kune pfupa nyaya, asi zvinopfuura izvo.
Iyo yeblackberry inoshandawo pahutano hwevakadzi, mukubata nezviratidzo zvePMS uye kuenda kumwedzi. Iyo yakanaka pakurapa hemorrhoid, hutano hweganda, kutapudza kwemanyoka, hutano hwekurara, kushushikana uye zororo, uye zvakare ine antioxidant chiito, icho chinovandudza hutano hweropa neitsvo.
Zvinobatsira here nekurasikirwa nevhudzi?
Blackberry tii inosimbisa iyo collagen zvivakwa zviripo mumuviri wemunhu uye imwe yadzo ibvudzi. Izvi zvinogona kubatsira mukusimbisa bvudzi, muhunhu hwavo uye kunogona kudzivirira kurasikirwa nevhudzi, zvinoenderana nechikonzero chekudonha uku.
Ko blackberry tii ine mhedzisiro here?
Chero chipi zvacho chakanyanyisa chakaipa. Nekudaro, chakanakira kuita kutenderera kwetii pazuva kuti usanwe zvakafanana zuva rega rega uye mune yakakwira kwazvo huwandu.
Kunyanya kunwa tii yeblackberry kune chepfu kumuviri, kunogona kukonzera matambudziko emudumbu, kusvotwa, kurutsa, manyoka, kurwadziwa nemudumbu uye kukuvara kwechiropa. Naizvozvo, idye kamwe pazuva, kaviri pavhiki, kunyangwe mukombe mumwe kana maviri, pasina kuwedzeredza kuitira kuti usazove nemhedzisiro inopesana sezvaitarisirwa.
Max Amora yakagadzirirwa kunyanya kune avo vakadzi vasingachagone kumira mhedzisiro yekuguma kuenda kumwedzi. Nekudaro, iine 100% fomu yechisikigo uye isina zvachose mhedzisiro, icho chinowedzerwa mumacapsule anoita zvinopesana nezviratidzo zvekuguma kuenda uye uremu, zvichikurudzira metabolism.
Iine mashoma macalorie, bheribheri mavitamini akati wandei akadai se: A, K, B uye E. Nezve izvi, nekuda kwezvinhu zvadzo zvisingaite, zvinobatsira kugadzirisa kusagadzikana, kurwisa hutachiona uye kunobatsira mukutakura mweya we oxygen muropa.
Chaizvoizvo zvinoshanda? Kodzera?
Ehe! Max Amora akakosha zvikuru kunyanya kune iwe unotambura kubva kumhedzisiro yekuguma kuenda kumwedzi uye, mukuwedzera, mhanyisa metabolism uye uremu nenzira ine hutano. Nezvo, inokwanisa kudzikisira kupisa, kupisa kupisa, kurwisa kushaya hope, kudzikamisa kushushikana uye zvakare kugadzirisa libido uye chimiro.
Zvakare, ndiyo yega 100% chigadzirwa chechisikigo chisina mhedzisiro kana zvinopesana zvinobatsira zvakanyanya mukutonga kwehomoni, kurwisa mhedzisiro yekuguma kuenda kumwedzi. Dzvanya bhatani pazasi uye utenge yako Max Amora izvozvi!
Kana iwe waifarira chinyorwa ichi nezve blackberry tii, igovana pane ako masocial network!
Lemon Kudya: Kunoshanda Sei? Unonyatsodzikira huremu here? Ndezvipi zvakanakira?
Omega 3: Tsvaga kuti ndeyei uye ndeapi mabhenefiti!
Kuchenesa meno: Iva nemazino awakamborota nezvako!